Xagee fasax loogu tagaa Spain: Shan meelood oo dalkeenna ah | Wararka Safarka
Xagee loo aadaa fasaxa Spain?
Luis Martinez | 01/10/2021 11:30 | Meelaha Dalxiiska loo tago, Espana
Jawaabta su’aasha meesha fasaxa loogu tago Spain waa badan yahay. Taasi waa, ma qirto hal jawaab. Dalkeenna waxaa ka buuxa meelo soo jiidasho leh oo lagu raaxeysto maalmo cajiib ah oo fasax ah. Laga soo bilaabo woqooyiga oo leh dabeecaddiisa cagaaran, xeebaheeda qallafsan iyo cunnooyinka macaan ee koofurta leh cimiladeeda xiisaha leh, farxadda dadkeeda iyo xeebaha bacaadka ballaadhan leh, dhammaan Spain waxay mudan tahay booqasho.
Oo waxan oo dhan iyada oo aan la xusin taariikheed Castilla y Aragón, qoraxdu Valencia (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan magaaladan) ama keli Catalonia. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talinaynaa shan meelood oo fasax loogu tago Spain.
1 Shan meelood oo u gaar ah oo lagu qaato fasax aan la ilaawi karin
1.1 San Sebastián iyo xeebta Basque
1.1.1 Xeebta basque
1.2 Córdoba iyo magaalooyinkeeda, oo ka mid ah meelaha muhiimka ah ee lagu qaato fasax wanaagsan
1.2.1 Magaalooyinka Córdoba
1.3 Murcia aan la aqoon, meel kale oo fasax loogu tago Spain
1.4 Magaalada Rodrigo
1.5 Magaalooyinka Soria
Shan meelood oo u gaar ah oo lagu qaato fasax aan la ilaawi karin
Dhammaan wixii aan kuu sheegnay, waxaan samayn doonnaa isku -darka isku -darka si aan kugula talinno shan meelood oo aad ku raaxaysan karto waaya -aragnimo lama -ilaawaan ah. fasaxyada ee Spain. Waxaan hubin doonnaa inay ka tirsan yihiin dhammaan dacallada dalkeenna iyo inay yihiin kuwo matala sida ugu macquulsan ee kala duwanaanta hodanka ah.
San Sebastián iyo xeebta Basque
Waxaan ka bilaabi doonaa talooyinkayaga waqooyiga Spain. Waxaan kuu sheegi karnaa taallada weyn Santander, laga soo bilaabo taariikhda Asturias ama kuwa qaaliga ah Xeebaha Galbeedka. Laakiin waxaan dooranay caasimadda Guipuzcoa maxaa yeelay, annaga fikirkayaga, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Spain.
Maaha wax iska yimid in ay ahayd mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu booqashada badnaa taariikhdayada oo dhan. The qaali ah La Concha bay, oo leh xeebteeda, waxay ahayd meel lagu qubeysto xitaa boqortooyada oo dhismayaal badan oo ka mid ahi waxay ka jawaabaan quruxdaas taariikheed.
Waxaad ku bilaabi kartaa booqashadaada San Sebastián qayb duug ah, oo leh dekeddeeda kalluumeysiga iyo waddooyinkeeda ciriiriga ah ee ciriiriga ah oo ay ka buuxaan maqaayadaha halkaas oo aad ku dhadhansan karto caan pintxos. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato basilica Baroque ee Santa María del Coro iyo kaniisadda Gothic ee San Vicente. Waxaad sidoo kale aaggaas ka heli doontaa matxafyada San Telmo, taariikhda Basque, iyo Badda. Sidoo kale, ha ilaawin inaad kor u kacdo buur Urgull, halkaas oo aad ku qaddarin karto aragtiyaha aan caadiga ahayn ee xeebta.
Si kastaba ha noqotee, laga yaabee inay xitaa caan ka tahay buurta kale ee ku taal dhammaadka ka soo horjeeda La Concha. Waan kaala hadalnaa buurta Igueldo, taas oo, marka lagu daro muuqaalka, aad leedahay beerta madadaalada ee qaabka belle epoque oo leh rooga roogga wareersan. Si aad halkaas u timaadid, waxaad isticmaali kartaa funicular -kii hore, kaas oo shaqeynayay ilaa 1912.
Ugu dambayntii, waa inaad ku aragtaa wicitaanka San Sebastián aagga jaceylka, oo ku beegan aagga ballaarinta magaalada oo ay ku jiraan dhismayaal laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad sida dhismihii hore ee Gran Casino, Tiyaatarka Victoria Eugenia ama Hotel María Cristina. Si kastaba ha ahaatee, laga yaabee in dhismaha ugu astaanta badan qaybtan magaalada ay tahay Cathedral -ka wanaagsan ee Adhijirka, oo la dhisay 1897-kii oo la raacay canon-Gothic canons.
Laakiin yaabka leh in fasax Guipúzcoa ku siinayo kuma eka San Sebastián. Waxaan kugula talineynaa inaad booqato magaalooyinka u dhow xeebta Basque. Iyo wax walba, Hernani, oo xaruntooda taariikhiga ahi tahay Goob Dane Dhaqameed; Azcoitia, oo leh dhismooyin aad u tiro badan sida guryaheeda dhaadheer; Hondarribia, iyada oo gidaarro waaweyn ama tuulooyin kalluumeysi oo yaryar sida Getaria halkaas oo aad ka heli doonto xeebo aad u qurux badan.
Córdoba iyo magaalooyinkeeda, oo ka mid ah meelaha muhiimka ah ee lagu qaato fasax wanaagsan
Haddii aad la yaaban tahay meesha aad fasax ugu aadi lahayd Spain, waxaan hadda kuu sheegeynaa meel aad u baahan tahay inaad booqato ugu yaraan hal mar noloshaada. Waxaan tixraacnaa Córdoba taariikhiga ah, oo leh dhaqankeedii Khilaafada iyo taallooyinkeeda cajiibka ah. Maaha wax iska dhaca in ay tahay magaalada ugu magacyada badan Dhaxalka Aduunka ee dunida.
Waxaa aasaasay Roomaankii qarnigii labaad BC, Córdoba wuxuu leeyahay taallooyin tiro badan oo laga soo bilaabo waayihii oo dhan, in kasta oo ay ku noolayd xilligii ay ku hoos jirtay xukunkii Muslimiinta, markii ay ahayd caasimadda Khilaafada.
Tiyaatarka Roomaanka, buundada iyo macbudka, dhismayaasha kale, waxay ka tirsan yihiin xilligii Laatiinka. Laakiin astaanta weyn ee magaaladu waa caan Masaajidka, oo lagu dhisay qarnigii XNUMXaad haraagii kaniisaddii hore ee Visigoth. Lafteeda, waxay kugu filnaan doontaa inaad booqato Córdoba.
Xitaa maanta waa kan saddexaad ee adduunka ugu weyn marka laga reebo Maka iyo masaajidka Istanbul, inkasta oo uu hadda yahay kaniisad katoolik ah. Waxa aad ka dhex arki karto waxaa ka mid ah Patio de los Naranjos, munaaradda gambaleelka Renaissance, albaabada badan sida Postigo del Palacio ama Santa Catalina iyo hoolka caanka ah ee loo yaqaan hypostyle. Laakiin sidoo kale kooxda heesta, meesha ugu weyn ee meesha allabariga ama cajiibka ah macsuur.
Sida laga yaabo inaad qiyaastay, Masaajidku ma aha taallada kaliya ee laga soo bilaabo xilligii Muslimiinta ee aad ku arki karto Córdoba. Warshadaha Guadalquivir ama qubeysyada Khaliifka ayaa iyagana iska leh. Laakiin waxa ka sii muhiimsan ayaa ah in la soo rogo Madiina Azahara.
Waxay ku taallaa ilaa siddeed kiiloomitir Córdoba, oo ku taal cagta Sierra Morena, waa magaalo qadiimi ah oo falastiin ah oo uu dhisay khaliifku Cabdullaahi III. In kasta oo ay da 'tahay, haddana aad ayaa loo ilaaliyaa. Waxyaabaha yaabka leh ee aad ka dhex arki karto waxaa ka mid ah Portico -ga Weyn, dhismaha basilica sare, Qolka hodanka ah ama guriga Jacfar.
Aragtida Almodóvar del Río
Maadaama aad joogto Córdoba, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale booqato magaalooyinka sida Montilla, oo leh haraagii qalcaddii hore; Jidka, iyada oo hadhaagii Carbeed, iyo Priego, oo leh xaafaddeeda La Villa iyo Balkoonkeeda Adarve. Laakiin sidoo kale Baena, oo leh hadhaagii qadiimiga ahaa; Zuheros, halka ay ku taallo Godka Fiidmeerta; Almodóvar del Rio, oo leh kaniisaddii qarnigii XNUMXaad, iyo Hornachuelos, oo leh qasrigeedii iyo jardiinooyinkii Moratalla, oo loo yaqaanay "Versailles of Córdoba".
Murcia aan la aqoon, meel kale oo fasax loogu tago Spain
Murcia (calle Trapería), oo ah meel aad u fiican oo fasax loogu tago Spain
Murcia kuma jirto meelaha ugu dalxiiska badan dalkeena. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay wax badan oo ay ku siiso. Mana ka hadlayno oo kaliya xeebaha cajiibka ah, gaar ahaan kuwa ku yaal agagaarka La Manga del Mar Menor, ama cimiladeeda diiran oo wacan.
Caasimadda gobolka lafteedu waxay leedahay dhismo weyn oo la taaban karo. Magaaladii hore, agagaarka Fagaaraha Cardinal Belluga, ayaa leh dan weyn. Waxaa jira cathedral ee santa maria, kaas oo isku daraya Gothic, Renaissance iyo, dhammaanba, qaababka Baroque. Intaa waxaa dheer, munaaraddeeda jalaska ee cajiibka ah, oo dhererkeedu yahay 93 mitir, waa astaanta magaalada.
Kaniisadda agteeda, waxaa jira kii hore Seminarka weyn ee San Fulgencio iyo Qasriga Episcopal, labadaba laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Laakiin waa inaad sidoo kale ku dhex socotaa waddooyinka dadka lugeynaya ee bartamaha, sida Silverware iyo Trapería. Midda koowaad, waxaad ku arki kartaa dhowr dhisme oo casri ah sida dukaankii hore ee La Alegría de la Huerta, halka kan labaadna, Qasriga Almodóvar iyo Gran Casino ay taagan yihiin.
Dhinaca kale, mid kale oo ka mid ah dhismayaasha ugu habboon Murcia waa Kaniisadda Santa Clara la Real, kuwaas oo gudaha, marka lagu daro, ay yihiin hadhaagii Alcázar Raac, qasri carbeed laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobnaad, taasina waxay ku siinaysaa madxafka farshaxanka xurmada iyo Andalusiyaanka.
Marka la soo koobo, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ku aragto magaalada Segura daaraha iyo dhismayaasha casriga ah. Waxaa ka mid ah kuwa ugu horreeya, kuwa reer Pérez-Calvillo, Vinader, Fontes iyo Almudí. Iyo, oo ku saabsan kan dambe, Diaz-Cassou, Almansa, Guillamón iyo guryaha Suuqa Verónicas.
Golaha Magaalada Ciudad Rodrigo
Waxaan kuu sheegnay meelaha fasaxa lagu aado Spain oo ah woqooyi, koonfur iyo bari. Hadda waxaan ka samayn doonnaa magaalo qurux badan oo xagga galbeed ka xigta. Waxaan tixraacnaa Ciudad Rodrigo, dhammaantood waa la caddeeyay Dhisme Faneed Taariikhi ah.
Layaab kuma noqon doontid aqoonsiga haddii aan kuu sheegno in dhaxalkeeda taariikhdu ay kaligeed bilaabato dhufaysyo, kuwaas oo ilaa maanta la dhawrayo si dhaw dhaw. Durba magaalada gudaheeda, waxaad leedahay yaabab sidiisa oo kale ah qalcaddii Henry II, ku taariikhaysan qarnigii afar iyo tobnaad; ah Hoolka Magaalada, Qaabka Renaissance, ama the Isbitaalka Xaragada.
Laakiin sidoo kale waxay leedahay Ciudad Rodrigo oo leh qaab dhismeed diimeed oo muhiim ah. Way ka dhex muuqataa cathedral ee santa maria, Shaqadii Romanesque ee u-gudubka Gothic oo ay Chapel-kiisa Weyn ku yaal meel allabari oo Isbaanish-Flemish ah oo cajiib ah. Waa inaad sidoo kale booqataa kaniisadaha San Andrés iyo San Cristóbal iyo kuwa cajiibka ah Chapel ee Cerralbo, oo ah qaabka Herrerian, iyo sidoo kale macbudka San Agustín iyo Seminarka San Cayetano.
Ugu dambayntii, ku noqoshada qaab dhismeedka madaniga ah, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato guryaha Vázquez iyo Cadena iyo daaraha Marchioness of Cartago iyo Águila ee Ciudad Rodrigo.
Waddo ku taal Calatañazor
Hadda waxaan u safreynaa miyiga Spain si aan u soo jeedino safar aan ku marno magaalooyinka Soria, oo qaarkood ka mid yihiin kuwa ugu quruxda badan dalka. Waxaan kaala hadalnaa magaalooyinka sida Burgo de Osma, oo leh Cathedral -ka cajiibka ah ee Santa María de la Asunción, Isbitaalkeedii hore ee San Agustín iyo qalcaddiisa, oo hadhaagii la keydiyey.
Laakiin waxaan sidoo kale tixraacnaa magaalooyinka sida Catalañazor, kaas oo haya dhammaan soo jiidashadiisii ​​dhexe; Medinaceli, oo leh qalcaddiisa, qasrigeeda ducal iyo kaniisadda kulliyadda, ama Almazán, oo leh dhaxalkeedii weynaa ee Romanesque.
Iyo xitaa kuwa kale oo aan aad loo aqoon Yanguas, oo waliba leh qalcad weyn; Rello, oo ku dul yaal buur nuurad ah, ama Monteagudo de las Vicarías, taas oo, maqnaanshaha qalcad, leh laba: La Raya iyo Qasriga Abaalmarinta. Waxaas oo dhan anigoon iloobin mucjisooyinka dabiiciga ah sida Vinuesa, oo ku yaal cagaha Urbión peak iyo caanka Laguna Negra.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay ilaa shan meelood meesha fasaxa loogu tago Spain. Laakiin hodantinimada iyo kala duwanaanshaha dalkeenu waa mid aad u weyn oo aan kuu soo bandhigi karno kuwo kaloo badan. Tusaale ahaan, qaaliga ah Costa Brava, socdaal ku Magaalooyinka Cadiz (halkan waad haysataa maqaal iyaga ku saabsan), magaalada taariikhiga ah ee Burgos ama Galician Rías Altas y Bajas. Miyaadan u malayn inay yihiin meelo la yaab leh?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Xagee loo aadaa fasaxa Spain?
Macbudyada Megalithic ee Malta